पुनःनिर्माणको दोस्रो किस्ता लिन प्राधिकरणको आह्वान -
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसक्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले शुक्रबार काठमाडाैंमा आयोजित कार्यक्रममा समयमा नै दोस्रो किस्ता लिएर घर पुनःनिर्माण गर्न भूकम्प पीडितलाई आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०७५ साल असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकालाई दोस्रो किस्ता लिने समय यही कात्तिक मसान्तसम्म तोकेको छ । सरकारले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्तामा रु. ५० हजार, दोस्रोमा रु. एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु. एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सात लाख ७६ हजार ९ सय १० लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये सात लाख ६८ हजार ५ सय ४९ लाभग्राहीले पहिलो, छ लाख १२ हजार १ सय ५ लाभग्राहीले दोस्रो र पाँच लाख सात हजार ४८ परिवारले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये चार लाख ६९ हजार २ सय ५९ घर पुनःनिर्माण भइसकेका छन् । एक लाख ९४ हजार ४ सय ५६ घर पुनःनिर्माणका क्रममा छन् । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ६० प्रतिशत घर पुनःनिर्माण सम्पन्न भए पनि ललितपुर जिल्लामा ३२ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक घर पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको कारण बुझ्न आवश्यक भएको भन्दै एक घर एक परियोजना बनाएर अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)का उपनिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले शहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सबैको सहयोग आवश्यक भएको भन्दै नभए अनुदान लिनबाट वञ्चित हुने बताए ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ललितपुर)का प्रमुख शिवराम गेलालले जिल्लामा प्रथम किस्ता लिई दोस्रो किस्ता नलिने, भूमिहीनले सम्झौता गर्न नसक्नु, आर्थिक अभाव हुनु, कम क्षेत्रफलको जग्गा हुनु, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद हुनु, केही लाभग्राही निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न इच्छुक नहुनुलगायतका समस्या रहेको बताएको थियो ।
आज थप १०८ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि